Mashoko Akavanzika Uye Zvisungo: Inobatsira uye Cons - Simple Tips By The Expert Of Semalt, Natalia Khachaturyan
Paunenge uchiita SEO, pane dzimwe nzira dzinonyengera dzinogona kunyengedza injini yekutsvaga chirongwa chekushongedza. Somuenzaniso, zvakavanzika zvinyorwa nekubatana zvinoumba chikonzero chezvimwe zve kugadzirwa kwezvinhu tricks kuita basa iri. Kune nzira dzakawanda dzekuvhara mavara mukati pewebhu peji. Zvimwe zvemashoko aya zvinosanganisira zvinowanikwa mundima iyi neChina Strategist Semalt , Natalia Khachaturyan:
Kushandisa ruvara rwemavara akafanana nehutano hwehutanhi,
Kuwana mifananidzo mumifananidzo kana video,
Kuisa mamwe mapepa mazita mashoma,
Kushandisa CSS kuisa mavara pamusana-screen,
Kuvanza permalinks, kureva, nekuisa pamunhu.
Muzviitiko izvi, maitiro akadaro anogona kusanganisira kuisa zvakawanda zvehutano nenzira isingaoneki kune vashanyi vevanhu. Uyezve, kubatanidza kunowanikwa muzviratidzo zvekucherechedza zvakadai sokuti komma inogara ichivanzwa kana isingaoneki - hozan sava.
Kuona zvakachengetwa zvakavanzika
Zvakavanzwa zvinowanzowanika nenzira dzakawanda. Munzira idzi dzose, mashoko acho anowanikwa kumakina asi asingaoneki kune vashanyi vevanhu. A simple ctrl + A basa inobatsira kusimbisa zvese zviri pawebsite. Mamwe mapepa madema eSeO anokwanisawo kushandisa imwechete yakajeka ruvara kumucheto..Mune zviitiko izvi, iwe unofanirwa kunyorera nekuisa pasi peji rose webhusa kune imwe shandisi yemutauro, uchishandisa kushandiswa kusina kusarudza. Iyi nzira inogona kubatsira kuzarura zvinhu zvose zvakavanzwa mukati pewebsite peji. Zvisungo zvinogona kuuya pane zvavanoita semvumalinks pawebsite yose.
Zvikonzero zvekuvanzwa zviripo
Vanhu vanoshandisa zvinyorwa zvakavanzika nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Chinhu chinonyanyozivikanwa pakuvanza zviri mukati peji yewebhu zvakatarwa. Vanhu vanovanza mamwe mazwi ekuwedzera mune zvinyorwa zvakavanzika kuedza nekunyengedza shanduro yekugadzirisa kuisa webhusaiti yako kutanga. Uyezve, keyword stuffing ibweti rinopisa SEO maitiro anobatsira zvikuru kubva kushandiswa kwezvinhu zvakavanzwa. Kuisa mazwi makuru akawanda pane peji yepawebhu kunounza kuderera kwehutano hwehuwandu pamwe nekuisa pangozi website.
Nzira yekuita sei zvinyorwa pawebsite yako inoonekwa?
Zvakavanzwa zvinogona kutungamirira pakuona kwewebsite kubva kuGoogle SERPs. Mune zviitiko izvi, chakavanzika chakavanzika chinobatsira vanhu kuwana mazano akawanda pamusoro pekunyorwa kwewebsite yavo. Iyo ini inokosha kuita kuti zvinyorwa zvako zvionekwe. Dzimwe nzira dzekuwedzera kuonekwa kwehupenyu hwako dzinosanganisira:
Mifananidzo: Zvinyorwa zvinotsanangurwa zvinogona kuwanika muhutano hwehu. Izvo zvinokoshawo kusanganisira mashoko anoverengwa nevanhu-uyewo mavara ezvinyorwa zvemufananidzo wese.
Vhidhiyo: Vhidhiyo inogadzirawo zvinyorwa zvinogona kuwanikwa zvekunyora. Iwe unogona kunyora mavhidhiyo kana kunyanya kusanganisira magwaro anotsanangura mavhidhiyo mu HTML.
Kune nzira dzakawanda dzehupfumi hunogona kukuvadza kuedza kwako SEO. Semuenzaniso, dzimwe nzira dzekutema SEO dzinogona kushandisa magwaro ekuviga kuti dzivanze mazwi avo ezvinyorwa zvinokonzera zvinangwa. Mune zvimwe zviitiko, vanhu vanogona kushandisa zvinyorwa zvakavanzika uye vanovhara mazamu mazhinji kune dzimwe nzvimbo. Nyaya ino inogona kukubatsira kuti uone zvakavanzwa zviripo pawebhu peji.